Maxaa sabab u ah soo laabashada ASWJ? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxaa sabab u ah soo laabashada ASWJ?
Suufidu, waxa ay hore ugu guuleysteen in ay xubno fican ku yeeshaan, Baarlamaanka Galmudug iyo hoggaanka ciidanka, waxayna xilligaan u soo laabteen in ay helaan qaar ka mid ah, kuraasta BFS.
GURICEEL, Somaaliya - 1 October 2021, Koox diimeedka Ahlu-sunna Wal-jamaaca (ASWJ), ayaa dib ula wareegtay gacan ku heynta magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud, kadib ku dhawaad labo sano oo ay saaxada siyaasadda ka maqnaayeen, waxayna u biratumanayaan in ay maamulka Galmudug ka fara-maroojiyaan Dhuusamareeb.
Kooxdaan, ayaa bishii September, isugu tagtay degaanka Huurshe oo dhaca waqooyiga Gobolka, halkaas, oo sanadkiiba mar Suufidu ku xusaan Sheekh Yuusuf Direed, waxaana si lama filaan ah, in ay dib isku soo abaabuleen, ku dhawaaqay Macalin Maxamuud Xasan Faarax, oo ah Guddoomiyaha Ahlu-sunna iyo Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan, oo ah wadaad taageero badan ku leh Galgaduud.
Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor), ayaa amray in laga hortago kooxdaan, taas oo sababtay in dhamaadkii bishii hore uu dagaal culus ka dhaco degaanka Bohol oo qiyaastii 30Km u jira magaalada Dhuusamareeb, halkaas oo ay ku naf-waayeen ku dhawaad 15 qof in ka badanna ku dhaawacmeen.
Bishii February 2020, dagaal ka dhacay Dhuusamareeb, gaar ahaan Xero-inji, oo xilligaas ay ku aruursanayeen hoggaanka iyo ciidamada koox diimeedkan, ayaa sababay in ay heshiis qaataan, kuna dhawaaqaan in ay ka baxeen siyaasadda, waxaana arrinkaas door weyn ka qaatay Ra’iisul Wasaarihii hore Xasan Cali Kheyre.
Hadaba, Maxaa xilligaan ku soo beegay dib u soo laabashada ASWJ?
Kooxdaan waxa ay si weyn ugu sheegataa in ay la dagaallamaan Kooxda Al-Shabaab, dhowr jeerna, waxa ay dhawaan carabaabeen in ujeedka soo laabashadooda uu sal u yahay, la dagaallanka Kooxdaas xiriirka la leh, Al-qaacida, hayeeshee, dadka u dhuunduleela damaca hoggaanka ASWJ, ayaa sheegaya in markaan u jeedku uusan ahayn arrinkaas oo kuraas Xildhibaan Federaalka iyo gor-gortan siyaasadeed ay doonayaan.
Sida ay Keydmedia Online u sheegeen xubno hore uga tirsanaa Guddigii Fulinta ASWJ, Sheekh Shaakir iyo xulafadiisu waxa ay doonayaan in ay Galmudug iyo Dowladda Federaalka la galaan gorgortan ku aaddan kuraasta Golaha Shacabka ee Baarlamaanka JFS, isla-markaana ay helaan ugu yaraan shan kursi oo degaan doorashadoodu tahay Dhuusamareeb.
Sida ay sheegayaan, xogo hoose oo ay KON ka heshay Guriceel, Macalin Maxamuud Xasan Faarax, oo ah Guddoomiyaha Ahlu-sunna ayaa doonaya inuu kuraas Baarlamaan u helo wiilka uu dhalay ee Cabdisamad Macallin Maxamuud, iyo wiilka uu Seediga u yahay ee Saadaq Sheekh Yuusud Direed.
Sidoo kale, ASWJ, waxa ay dooneysaa in ay ku gorgortanto, kuraas kale, oo ay ka mid yihiin, HOP147 iyo HOP138, oo ay Baarlamaankii 10-aad ku kala fadhiyeen, Mahad Maxamewd Salaad iyo Siciid Nuur Gariish, HOP138, waxaa hadda tartamayashiisa ka mid ah, hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxman Cabdishakuur Warsame.
Suufidu, waxa ay hore ugu guuleysteen in ay xubno fican ku yeeshaan, Baarlamaanka Galmudug iyo hoggaanka ciidanka, waxayna xilligaan u soo laabteen in ay helaan qaar ka mid ah, kuraasta BFS, ku matala beelaha Cayr, Dir iyo Mareexaan.
Hoggaanka ASWJ, waxa ay isku dayi doonaan, in ay dadaal walba ku bixiyaan in miiska wada-hadalka la tago, ka hor inta aan la guda galin doorashada Golaha Shacabka, si ay riyadooda u meel mariyaan.
Waxa ay weerar ku qaadi doonaan Xarunta Galmudug ee Dhuusamaeeb, si deg deg loola hadlo, waxayna marka hore sameyn doonaan, daandaansi ciidan si ay eedda dagaalka dusha uga saaraan Galmudug, una xalaaleeyaan duullaankooda Dhuusamareeb.